လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ - Aesthetic & Plastic Surgery Center In Yangon: The Clinic De Novo
သင်ဟာ AYA ဘဏ်ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Admin တို့ရဲ့ The Clinic De Novo မှာ Laser Treatments တွေဆို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရယ် Facial Treatments တွေဆို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရယ်ထိ Discount တွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတာ….
Monthly Discounts၊ Weekly Discounts တွေကိုမျှော်နေမယ့်အစား နွေ၊မိုး၊ဆောင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အကျုံးဝင်တဲ့ AYA Bank Card Discount Plan ရှိတာမို့ Admin တို့ဆိုင်ကို သယ်ရင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါး ခုပဲလှမ်းလာခဲ့ကြပါတော့နော်။
– Acne, Syringoma, Comedones, Blackheads Treatments
– Acne Scars Treatments
– Pigmentation (Melasma, Frackles, Sun Spots) Treatments
– Facial Wrinkles Treatments
– V-Shape Face (Botox, Filler, Threads)
– Face Lift (Threads, Skin Tightening, and Surgical Face Lift)
– Laser Moles Removal
– Dry Skin, Oily Skin, Sensitive Skin
– Double Eye Lid (Surgical)
– Droopy Eyes (Surgical and Non Surgical)
– Eye Bag Removal (Surgical and Non Surgical)
– Lip Shaping, Augmentation and Reduction (Surgical and Non Surgical)
– Slimming and Anti-Cellulite
– Body Scars, Birth Marks
– Skin Whitening and Rejuvenation
Collaboration with Real Fitness (Myanmar)
Are youamember at Real Fitness Myanmar?
Enjoy special promotions at The Clinic De Novo just by flashing your Real Fitness Membership Card.
20% off for any laser treatment
15% off for any facial treatment
10% for botox, filler and thread lifting
Collaboration with CB Bank (Myanmar)
Do u have CB bank’s credit card?
CB Bank’s Credit Card ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်း “The Clinic De Novo” ဆေးခန်းတွင်အတိုးနှုန်း 0% ဖြင့်အရစ်ကျပေးချေအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ခေါင်းအစခြေအဆုံး Treatment များ၊ အလှအပဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းများကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် CB Bank’s Credit Card ကိုင်ထားတဲ့သူတိုင်းအတိုးနှုန်းမရှိ 6လ၊ 12လ ဖြင့် အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – မျက်ရစ်ခွဲစိတ်မယ်ဆို 1,350,000 Ks ကျသင့်ပါမယ်။ CB Bank Credit Card လေးနဲ့ treatment ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Treatment ဝယ်ပြီးမှသာ ၆ လ (သို့) ၁ နှစ် အရစ်ကျပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်နဲ့ အရစ်ကျဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် CB Bank ကို တစ်လ 1 သိန်းကျော်သာ သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။